हिमालय क्लव पोखराले कालिका मन्दिरमा घटसथापनका दिन आरती गर्ने | Samacharpati हिमालय क्लव पोखराले कालिका मन्दिरमा घटसथापनका दिन आरती गर्ने – Samacharpati
हिमालय क्लव पोखराले कालिका मन्दिरमा घटसथापनका दिन आरती गर्ने
पोखरा, ८ असोज । हिमालय क्लव पोखरा १६, बाटुलेचौरले विजयादशमीको उपलक्ष्यमा स्थानीय कालिका मन्दिरमा घटसथापनका दिन आरती कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ । सो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न क्लवका कार्यसमितिका सदस्य प्रकाश भट्टराईलाई संयोजकको जिम्मेवारी क्लवले प्रदान गरेको छ । त्यस्तै गरी क्लव स्थापनाको २३ औं बर्षको उपलक्ष्यमा क्लवले यहि कार्तिक १६ गते २२ औं रक्तदान, चियापान तथा शुभकामना कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ । सो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न क्लवका द्धितिय उपाध्यक्ष दुर्गालाल श्रेष्ठलाई संयोजक तोकेको छ ।
सोही दिन क्लवले संचालन गर्ने गरीरहेको स्वर्गीय नरहरि देवकोटा स्मृति समाजसेवा पुरस्कार प्रदान गरिने भए अनुसार पुरस्कृत गरिने व्यक्तित्व छनौट गर्नका लागि क्लवको कार्यसमितिको वैठकले क्लवका मानार्थ सदस्य बेनीबहादुर बस्नेत, सल्लाहकार खिमलाल अधिकारी, प्रथम उपाध्यक्ष सुशील बस्नेत, कालिका मन्दिर तथा कोत ममलियत व्यवस्थापन समितिका सचिव नारायणप्रसाद देवकोटा सदस्य रहेको सिफारिश समिति गठन गरेको छ ।
त्यस्तै गरि सावित्री लिलाधर स्मृति कृषक पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिने पोखरा वडा नं. १६ भित्र उत्कृष्ठ कृषक छनौट गरी सिफारिश गर्नका लागि कृषि विज्ञ बेनीबहादुर बस्नेत, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ का वडा सदस्य मेहरमान थापा, अक्षयकोष संस्थापक कृष्णप्रसाद अधिकारी, क्लव सल्लाहकार ताराप्रसाद तिमिल्सिना र क्लव कार्य समिति सदस्य पुष्पराज अधिकारी रहेको छनौट समिति क्लवले गठन गरेको छ ।
बागलुङ नगरवासीलाई शुद्ध पानी खुवाउन उच्च अदालतकाे आदेश
विदेशमा रहेका ६६५ नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण, १४ जनाले गुमाए ज्यान,